रोचक बिचित्र – Page2– JanaSanchar.com
दुनियाँमा कैयन् अनौठा प्रथाहरु छन् । कतिपय प्रथाहरु निकै अन्धविश्वासी तथा दर्दनाक पनि रहेका छन् । तर सदियौँदेखि यस्ता दर्दनाक प्रथाको पालना पनि हुने गरेको छ भन्ने झनै दुःख लाग्छ । एउटा यस्तै प्रथा अफ्रिकामा रहेको छ, जसको बारेमा सुन्दैमा जिउ काँप्छ । दक्षिण अफ्रिका, क्यामरुन र नाइजेरियामा यो प्रथा रहेको छ । साथै बेलायतमा बस्ने..
यस्तो छ अनावश्यक रौँ हटाउने घरेलु तरिका
शरीरको कतिपय भागमा आउने अनावश्यक रौंले सौन्दर्यमा बाधा सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । रौं आउनै नदिने वा सदाका लागि हटाउने अनेक उपायको खोजीमा विशेष गरी महिलाहरु लागिपर्छन् । रौं हटाउन बजारबाट ल्याईने केमिकमयुत्त क्रिमले छालालाई समेत असर गर्न सक्छ त्यसैले रौँ हटाउन घरेलु उपाय अपनाउ सके छालामा यसले नकारात्मक असर पादैन । रौं हटाउन निम्न..
२ सयपटक प्लास्टिक सर्जरी गराउँदा यस्तो भयो नितम्ब
आकर्षक देखिनका लागि महिलाहरु केसम्म गर्दैनन् । जिम, योगा, डाइटिंग तथा प्लास्टिक सर्जरी आदि । तर कतिपयमा सुन्दर देखिने नशा यति धेरै हुन्छ कि उनीहरुलाई प्लास्टिक सर्जरी गराउने लत नै लागेको हुन्छ । यस्तै एउटा नाम हो, स्टार डेलगुडाइस । बेलायतको लिचफिल्डमा जन्मिएकी २८ वर्षकी डेलगुडाइसले अहिलेसम्म लाखौँ पाउण्ड रकम प्लास्टिक सर्जरीमा खर्च..
खजुराहो मन्दिरमा किन बनाइयो कामोत्तेजक आकृतिहरु ?
भारतको मध्यप्रदेशस्थित खजुराहो मन्दिर सदैव चर्चा एवं विवादको केन्द्र रहिआएको पाइन्छ । यसले आफ्नो निर्माण कालदेखि आजसम्मको यात्रामा अनेकौं आरोहअवरोहलाई आत्मसात् गरेको छ । यो मन्दिर अहिले भारतको एक प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित छ । इतिहासकारहरूका अनुसार १२ औं शताब्दीतिरबाट निर्मित खजुराहो मन्दिरहरूको समूहमा जम्मा ८५ वटा..
किन विश्वमा नै फरक छ नेपाल ? जान्नुहोस नेपाल सम्बन्धी केहि रोचक जानकारी ।
नेपाल ! हिमालको काखमा रहेको विश्वको सबै भन्दा सुन्दर देश , बिहान सुर्यको उदयसंगै सेता दन्तलहर देखाएर हासिरहेको हुन्छ । पहाडबाट तल तिर निरन्तर बगिरहने खोलाले भरिरहने संगीत र हावाको तालसगै तराईका फाटहरु झुलीरहेका हुन्छन । फरक जाति, भाषा , धर्म , सस्कृतिका मानिसहरुको बसोबास रहेको देश हो नेपाल । हिमाल देखि तराई सम्म आ-आफ्नै बिशेष पहिचान..
दुनियाको एउटा यस्तो ठाउँका बारेमा के तपाइँले कहिल्यै सुन्नुभएको छ, जहाँ ७० वर्षका वृद्धा महिलाहरु पनि १७ वर्षे उमेरका झैँ तन्नेरी र सुन्दर देखिन्छन् ? सुन्दैमा अनौठो तथा लोभलाग्दो लाग्ने यस्तो यथार्थ पाकिस्तानको एउटा गाउँमा पाइन्छ । यो संसारमा सयौँ आदिवासीहरु बसोबास गर्दछन् । ती मध्इे एक हुन्जा आदिवासी यस्ता छन् जो वास्तवमा..
जीवनभरमा केवल एकपटक मात्र नुहाउँछन् यहाँका महिला
अफ्रिकाको उत्तरपूर्वी नामिबियास्थित कुनेन प्रान्तमा बस्ने हिम्बा जनजातीका महिलाहरु आफ्नो जिवनमा केवल एकपटक मात्र नुहाउँदछन् । त्यो पनि आफ्नो बिहे हुने बेलामा । उक्त समुदायका महिलालाई पानीको प्रयोग गर्न निषेध छ । यतिसम्म की उनीहरु लुगा धुन पनि पाउँदैनन् । यहाँका महिलाको सरीरको छालाको रंग पनि रातो हुन्छ । यसको पछाडि पनि ठूलो कारण छ..
किन लाग्छ मदिरा ?
मदिरालाई वल्र्ड एक्सेप्टेड सोसल ड्रिंक्सका रूपमा लिइन्छ । यसको सेवनपछि मानिस लठ्ठिनेदेखि विभिन्न अशोभनीय गतिविधि पनि गर्न थाल्छ । कतिपय मानिस यसको सेवनले जीवनलाई नै धरापमा पारिरहेका हुन्छन् । किनकि, यसको अत्यधिक सेवनले कलेजो फेल हुने समस्या हुन्छ । यद्यपि, यसको खपत विश्वभरि नै हुने गरेको छ । विशेषगरी नशाका रूपमा यसको सेवन गरिन्छ । किन..
यी हुन् दुनियाकै बलवान मानिस, जसले काँधमा बोक्छन् हेलिकप्टर
मानिसले हेलिकप्टर उडाएको कुरा त कुनै समाचारको विषय बन्ने चिज भएन । तर जब मानिसले हेलिकप्टरलाई काँधमा बोकिदिन्छ, तब त्यो घटना मूख्य समाचार नै बन्दो रहेछ । काँधमै हेलिकप्टर बोक्न सक्ने व्यक्ति फ्रान्ज मुलेनर विश्वका सबैभन्दा बलवान मानिस हुन् । अष्ट्रियाका नागरिक फ्रान्जले आफ्नो काँधले हेलिकप्टर बोकेर गिनिज बुकमा नाम लेखाइसकेका छन्..
जब घरबेटीले भाडाको साटो सेक्स मागे…
लण्डनमा कोठा भाडामा लगाउने घरबेटीहरुले भाडाको सट्टा सेक्सको माग गर्दै ‘रेन्ट फर सेक्स’ भन्ने अभियान चलाउँदै विज्ञापन छाप्न थालेपछि त्यसको सत्यताबारे बुझ्न गएकी बीबीसी थ्री डकुमेन्ट्रीकी पत्रकार एली फ्लिनको अनुसन्धानमा आधारित । ‘हो, खाना पकाई दिए बापत, सफाई गरिदिए बापत र बस्नलाई छानो दिए बापत मसँग सेक्स गर्न पाउने प्रस्ताव राखिँदै..